स्वतन्त्रताको मूल्यमा शेखा लातिफा, हया र पारस - Dainik Nepal
डिल्ली अम्माई २०७६ मंसिर १२ गते ७:४१
जब नसामा स्वतन्त्रताको तरङ्ग रगतसंगै बग्न थाल्छ त्यसपछि राजा र रंककों भेद विलुप्त हुँदै जान्छ र त्यो सन्यासी झैँ समानता खोज्दै प्रकृतिको काखमा आइपुग्छ। दरबारबाट प्रकृति तर्फ हुत्तिंदा पुर्व युबराज पारस शाहलाई कसैले मति बिग्रेको भने, कसैले त्यति ठूलो मान सम्मानको खिल्ली उडाउदै साधारण तहमा आइपुगे भने । कतिले त धतुल्लाए समेत भन्न पछि परेनन् । उनलाई दरबार हत्याकाण्डमा मुछ्न पनि खोजियो ।
उनलाई बिबादको भूमरीमा पारेर चुट्नु चुटियो । उनको रगतमा बगेको स्वतन्त्रताको मूल्य जहाँनिया राजतन्त्रको खोक्रो औपचारिकताबाट प्राप्त नहुँदा देखिएको विक्षिप्तता कसले देख्नु । त्यो बिद्रोहभित्रको मूल्य यो युगले पहिचान गर्ने गतिमा थिएन र अझै केहिकाल गर्दैन पनि । अझै लामो समयसम्म उनलाई बेलुन झैँ उडाइएला, उचालिएला, पछरिएला । उनको त्यो बिद्रोहभित्रको मूल्य यी मूल्याहाहरूको बैगुनी युग सकिएपछि खोज्न थालिनेछ ।
प्रेमको लागि मृत्युदण्ड पाएका सन्त क्लेडियस‘को बिद्रोही स्वर फ्लेमेनियाको चिहानबाट ब्युझन झन्डै १८०० वर्ष लाग्यो भने पारसको विद्रोह वा विक्षिप्तताबारे आगामी युगले केही न केही मूल्य भेट्टाउने छ। स्वतन्त्रता प्रेमीहरूले दरबारिया जीवन कैदीहरुको पनि नरक हो भन्ने कुरा स्वीकार्दै त्यस्तो जीवनको परित्याग गर्नु पनि साहसिलो बिद्रोह हो । योभन्दा धेरै त अझै पनि हाँस्ने छन् ।
जोर्डनी राजाकी सौतेली बहिनी तथा दुवइका सम्राटकी पत्नी हया जसको बिद्रोहले संसारका मानिस तरंगित बने । हयाले मृत्यु वा बिद्रोह भनेर दरबारिया पर्खाल नाघ्ने साहस गरिन । त्यो सकसपूर्ण बिद्रोहको मूल्य उनी आँफैलाई बाहेक कसलाई थाहा होला । उनका दुई छोरीको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि उनले दरवारको सम्पूर्ण औपचारिक सम्मान त्यागिन । अरब राजदरबारको औपचारिक जेल संसारबाट मानबीय स्वतन्त्रताको लागि बिद्रोह गरेकी शेख मोहम्मदकी छोरी सेखा लातिफाले जुन राजकीय औपचारिकतालाई नरक भनेर सम्बोधन गरिन त्यहि नरकबाट बिद्रोह गर्दा पूर्व युबराज पारसलाई बात लाग्यो ।
तसलिमाले मुस्लिम महिला पिसिएको धार्मिक जाँतोको हाँतो भाच्दा उनीमाथि फताहा जारि गरियो । सभ्य समाजका राजकुमारी डायनाहरू पर्खालभित्रको औपचारिकता तोड्दै गर्दा सुरुङ्गभित्र प्राण त्यागे । पारसहरूले चाहेको स्वतन्त्रताको मूल्यबारे कतै चर्चा भएन तर निरासाका क्षणहरुमा नसाका साथ जीबन सक्याएको भनेर सकुनीहरूले खैजारी पिटे । मान्छेको जीवनमा स्वतन्त्रता र संभाबभन्दा कुनै बहुमूल्य सम्पदा केही छ ? यदि छैन भने नारकीय औपचारिकताबाट सकिनसकी एक्लै गरेको बिद्रोह वा अलगाबलाई थोरै सम्मान गर्दा के फरक पर्छ ?
प्राकृतिक स्वतन्त्रलाई अति कैद गर्दै लगियो भने त्यसको परिणाम सकारात्मक हुँदैन । पूर्व युबराज पारसको उन्मुक्त घुमफिर शैली, मानबीय समबेदनाको धार, साधारणपन र आचरण नितान्त प्राकृतिक हुँदो हो यदि त्यसलाई पूर्व राजाको परिवारले अप्राकृतिक दवाबबाट राजा वा दरबारिया बन्ने दवाब नदिएको भए । मान्छे राजाको कोखमा जन्मे पनि जनसाधारण हुन पाउनुपर्छ । दरबारबाट एक्लै घुमफिर गर्न पाउनुपर्छ, जनसाधारणसंग उठबस गर्न पाउनुपर्छ र चाहना छ भने युबराज जोगी बन्न समेत पाउनुपर्छ ।
त्यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर दरबारीयाहरूको जीवन जनसाधारणभन्दा भिन्न, भद्दा, नितान्त कृतिम बनाइएको हुन्छ । उनीहरूको स्वतन्त्रता पिंजडाभित्र मात्र हुन्छ । त्यसैले दरबारीयाहरू प्राय मनोरोगी हुन्छन । त्यो कुरा बाहिर भनिदैन तर सत्य कुरा के हो भने प्राकृतिक स्वतन्त्रता कुल्चिएपछि मानसिक कोषहरू सिथिल हुँदै जान्छन र बाहिरी संसार अपरिचित बन्दै जान्छ । मानव वा त्यो परिवेशको मान्छे घरपालुवा बन्दै जान्छ । अन्तत ऊ मनोरोगी हुन्छ । एउटा कडक अम्मलको सहाराले जीवन गुजार्न बाध्य हुन्छ वा पारिन्छ ।
स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भएपछि मान्छेको आत्माबल खिइदै जान्छ र नशाको सहाराले दवाबपूर्ण जीवन जिउन थाल्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभाबमा मान्छे बरालिन्छ र आंफैभित्र हराउन थाल्छ । त्यो क्रमशः मनोरोगको सिकार हुन्छ । सँधै जनसाधारणको संसयमा बाच्न चाहन्छ मान्छे, प्रकृति प्रेमी र मानवीय मूल्यको महत्व थोरै भएपनि चिनेको हुन्छ मानवीय चेतनाले ।
पारस जसले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई दरबारीया सान सौकतसंग साट्न कदापि तयार भएनन् । दरबारभित्र उनलाई ठीक पार्न अनेक प्रयत्न भयो होला तर, उनको मनले मानेन । उनको मन अनावस्यक दवाबले थिलोथिलो भयो होला तर, बुद्धले जसरी दरवार त्याग्ने परिवेश पनि बनेन । विक्षिप्त अबस्थामा सडकमा निस्के, जता मन लाग्यो उतै हिँडे । उनी भड्के । भित्रभन्दा मनले बाहिर आनन्द मान्यो । त्यसैमा आल्हादित बने । रणबहादुर र पृथ्बी बीरबिक्रम झैँ उदण्ड हुने परिवेश बनेन । उनको विद्रोहको भड्काव पूर्ण नहुँदै राजतन्त्र गयो ।
चेतनासँगै जागृत भएको बिद्रोहले समाजमा जागरण पैदा गर्छ तर चेतना मरिसकेपछि वा चेतनाले बाटो नभेट्दै गरेको बिद्रोहले आशाको बिमोचन मात्र गर्छ ।
उनको बिद्रोह दोश्रो खालको देखिन्छ । पूर्व युवराज पारसको अहिलेको अबस्था दरबारीया रबैयाप्रतिको मानसिक बिद्रोह हो, जसले उनलाई मात्र गिज्यायो । दरबारिया बाहेक कसैलाई असर गरेन । स्वतन्त्रताको मूल्य बुझ्नेले उनको सम्मान नै गरे, उनलाई राजाको रुपमा देख्न चाहनेहरूले उनैलाई गालि पनि गर्न थाले । जसलाई उनले मतलब नै गरेनन् ।
उनले यदी दरबारीया सामान्तभित्रका सम्पूर्ण औपचारिकता बिरुद्द आवाज सहित बिद्रोह गरेको भए पारससंग नेपालीको अझै आशा जोडिएको हुन्थ्यो । उनी अधिक सम्मानका पर्याय बन्थे । तर उनको बिद्रोह चेतनाको उत्कर्षलाई छाम्न सक्ने स्वतन्त्रताबादी बाहेक कसैले बुझ्न, सुन्न वा खोज्न सकेन । कसैले कारण खोज्ने जाँगर नै चलाएन । उनको बिद्रोहलाई नेपालीहरूले अरबियन राजकुमारी हाया, महारानी सेखा लातिफाको बिद्रोह जत्तिको महत्व पनि दिएनन । दरबारको भव्यताबाट भागेको, औपचारिकताबाट तर्सेको र उच्च आदर्श सम्झने दरबारीया शिक्षाबाट अलग्गिएर भुस्याहा जीवन जिउन रुचाएको भन्ने उनकै वरिपरिकाहरूले आरोप लगाए ।
हल्का तर्कले उनको गहन मानसिक प्रताडनाको खिल्ली उडाइयो । त्यसैले अझैसम्म उनी रुघ्ण कृतिमता चाहने आफ्नो परिवारको नजिक पर्न चाहन्नन् । उनलाई जनताले बाटेको लठे पिङ्ग, साधारण मान्छेहरूसंगको हिमचिम, दरवारीया साङ्लोभन्दा महत्वपूर्ण छ । उनी प्रकृति प्रेमी झैँ प्रकृतिको काखमा भौतारिइरहन्छन् । राजसंस्थाप्रतिको उनको लगाब हिजो सक्तिमा हुँदा पनि थिएन, अहिले पनि छैन ।
उनको जीवनले मृत्युबाट पटक पटक खै किन उनलाई बचाई रहेको छ । बाँचेको जीवनको एकपल पनि औपचारिकतामा बिताउन उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सत्य योगी वा मानवताका उच्च अनुरागी भेटेको भए उनी बुद्ध झैं बैरागीदै सत्यको खोजीमा हिड्थे होला । तर यो ढोगीहरूको हावा चलेको समयमा बुद्ध जस्ता सन्यासी कहाँ भेटिनु । त्यैपनि प्रकृतिको हावा बहने भिर, पाखा, खोला र नालाहरूमा पारस जोगी जस्तै टुप्लुक्क भेटिन्छन ।
उनको बिद्रोहमा कहिँ कतै समाजलाई नकारात्मक प्रभाब पारिहाल्ने बिरूप चित्र भेटिंदैन । त्यसैले ब्याक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि उनको जीवन जिउने शैली र सामाजिक मूल्य सहितको आगामी गन्तब्यलाई असम्मान गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । चेतनाबाट बिद्रोह नभए पनि ब्याक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि उनको विद्रोहको कहिँ न कहिँ अर्थ छ।
औपचारिक यातना खप्न सकिदैन भने चिच्याउन मजाले पाइन्छ। यातनाको समयमा जेलबाट भाग्नु निजी बिचारमा बिद्रोह हो । त्यो कैंदीलाई भगौडाभन्दा अन्याय हुन्छ । कुलिन दरबारीयाहरूको सात पत्रे पर्खाल ज्यादै असजिलो छ नाघ्न । बिद्रोह कालमा उनको समतापूर्ण उन्नयन, जन सम्पर्कको पर्दा बिहीन बाटो र एक मानबले अर्को मानबलाई शासित र शासक बनाउने विभेद बिरुद्दको स्वतस्फुर्त अलगाबलाई देख्नेहरूले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । उनको बिद्रोहमा पनि त्यस्तै केही समानताका सारहरू छन् ।
हजारौं दाशीको रासलिला, दमित बिद्रोहीको रगत र नागरिक पसिनाको पिरामिडमा आश्रित दरवारप्रतिको अनन्त घृणा, निरन्तर शासक बन्ने प्राकृतिक न्याय बिरुद्धको चेतना र समभावको प्रारम्भिक बिन्दुमा यस्ता बिद्रोहको सम्झना हुने गरेको छ । संसारले यो बुझ्ने दिन पनि आउनेछ कि संसारको अन्तिम सार वा सत्य औपचारिकता मात्र हुँदै हैन, प्राकृतिक जीवनको अन्तिम सत्य कृतिम घेराबन्दीभित्रको विभेदकारी दरबारीया शिक्षा त झन् हुँदै हैन ।
अनौपचारिक मानवीय स्वतन्त्रता र आत्मिक समत्वपूर्ण स्वाभिमानको लागी गरिने शेखा लातिफा, हाया, डायना र पारसका बिद्रोह प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले नितान्त जायज छन् । एक्काइसौ शताब्दीले गिज्याइरहेको उचनिच वा राजारैती बिचको घेरा नमेटिदासम्म यस्ता बिद्रोहको महत्व रहिरहनेछ ।
नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने कुरा राजतन्त्र फर्काउनेसँग जोडिन्छ : रणजित राय
स्वास्थ्य बुझ्न अस्पताल पुगेका ‘हाईप्रोफाइल’लाई पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न दिइएन
उपनिर्वाचनका लागि आज रातिबाट मौन अवधि सुरु हुँदै
कास्की पुगेर प्रचण्डको कडा जवाफ– देउवाको उटपट्याङले टिठ लाग्यो
उपेन्द्र यादवका केन्द्रीय नेताले पार्टी छाडे, नेकपामा प्रवेश
अर्घाखाँचीकाे बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेकाे संख्या १७ पुग्याे (अपडेट)
संगठन बलियो बनाउँदै नेकपा : दुई वर्षभित्र ३२ लाख पार्टी सदस्य
ग्लोबल आइएमई बैँकको ३ नयाँ शाखा सञ्चालनमा